ဦးသိန်းစိန် အစိုးရ ပေးစရာ အကြွေးတခု
ကလိမ်ကကျစ်ထောက်လှမ်းရေးက သေဒဏ်စီရင်ချက်ချထားတဲ့ ကိုဖြိုးဝေအောင် ဒီကနေ့ ပြန်လွတ်လာ ပါပြီ။ အင်မတန်ကောင်းတဲ့သတင်းတပုဒ်ပါပဲ။
၂ဝ၁ဝ ပြည့်နှစ် X2Oသင်္ကြန်မဏ္ဍပ် ဗုံးပေါက်ကွဲမှုတွေဟာ သူ့လက်ချက် ဆိုပြီး အစိုးရက သူ့ကို စွပ်စွဲ ထောင်ချခဲ့တာပါ။
သူ လွတ်လာပေမယ့် အိမ်မပြန်နိုင်သေးပါဘူး၊ ထောက်လှမ်းရေး အရာရှိများရဲ့ လက်ချက်ကြောင့် ဆေးရုံမှာ ရှိနေပါတယ်။
at 8/04/2012 11:43:00 PM No comments:
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် ၊ ဓာတ်ပုံ- နိုင်ငံတော် သမ္မတရုံး အင်တာနက်စာမျက်နှာ
ယနေ့ နေ့လယ်ပိုင်းက သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်သည် ဦးခွန်ထွန်းဦး၊ ဦးအေးသာအောင် အစရှိသည့် နိုင်ငံရေး ပါတီခေါင်းဆောင်များနှင့် နေပြည်တော်တွင် တွေ့ဆုံကြပါတယ်။
နိုင်ငံရေးပါတီခေါင်းဆောင်များဖြစ်ကြတဲ့ ဦးခွန်ထွန်းဦး၊ ဦးအေးသာအောင် အစရှိတဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီများ က ခေါင်းဆောင်တွေက တဦးချင်းအနေနဲ့ သမ္မတနဲ့ မိတ်ဆက်စကားစပြောပြီး ရင်းရင်းနှီးနှီး နိုင်ငံအကျိုး အတွက် ဆွေးနွေး တင်ပြကြတယ်လို့ သိရပါတယ်။သမ္မတကလည်း တိုင်းပြည်ရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေကို ချက်ချင်းဖြည့်ဆည်းပေးရန် မစွမ်းနိုင်သေးတဲ့ သက်တမ်း တနှစ်ကျော်သာ ရှိသေးတဲ့ အစိုးရဖြစ်ကြောင်း၊
at 8/04/2012 11:14:00 PM No comments:
အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန မူဆလင် လူ့အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ အထူးကိုယ်စားလှယ် မစ်္စဖာရာပန်ဒစ် သ် (Farah Pandith) ဟာ မြန်မာနိုင်ငံကို ဇူလိုင်လ (၂၈) ရက်နေ့ကနေ သြဂုတ်(၁) ရက်နေ့အထိ သွားရောက်ခဲ့ တယ်လို့ သြဂုတ်လ (၃) ရက်နေ့က အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးဌာနက ပြောကြားပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ မစ္စပန်ဒစ်သ်ဟာ လူထုအခြေပြု လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေ၊ တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ ဘာသာရေး အဖွဲ့အစည်းတွေ၊ ရိုဟင်ဂျာအဖွဲ့အစည်းတွေ၊ လူငယ် အဖွဲ့အစည်း ခေါင်းဆောင်တွေ၊ ပြည်တွင်းနဲ့ နိုင်ငံ တကာ လူမှုရေး အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ
at 8/04/2012 11:10:00 PM No comments:
အမေရိကန် ပိတ်ဆို့မှု သက်တမ်းတိုးခြင်းကို USCB ကြိုဆို
မြန်မာ့သွင်းကုန် ပိတ်ပင်တားမြစ်မှု အပါအဝင် အခြား အရေးယူ ပိတ်ဆို့မှုများကို သုံးနှစ် ထပ်မံ သက်တမ်းတိုး ရန် အမေရိကန်အာက်လွှတ်တော်က ကြာသပတေးနေ့က မဲခွဲဆုံးဖြတ်ခဲ့သည့်အပေါ် မြန်မာ့အရေး လှုပ်ရှားနေသည့် အမေရိကန်အခြေစိုက် US Campaign for Burma (USCB) က ကြိုဆိုလိုက်သည်။
တရားဥပဒေ စိုးမိုးမှု မရှိသည့် စနစ်အောက်တွင် လူ့အဖွဲ့အစည်းနှင့် တိုင်းရင်းသား လူနည်းစုများအပေါ် ရာဇဝတ်မှုများ ဆက်လက် ကျူးလွန်နေကြသော အုပ်ချုပ်သူ အပေါ်ယံအလွှာ၊ စစ်ဘက်နှင့် အာဏာပိုင်များနှင့် ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်နေ သည့် စီးပွါးရေးသမားများအပေါ် ဒဏ်ခတ်အရေးယူမှုများအား
at 8/04/2012 11:02:00 PM No comments:
ထားဝယ်မြို့၌ (၂၄)နှစ်မြောက် ၈၈၈၈ နှစ်ပတ်လည် အခမ်းအနားအား ကျင်းပပြုလုပ်မည်..
ထားဝယ်မြို့၌ (၂၄)နှစ်မြောက် ၈၈၈၈ နှစ်ပတ်လည် အခမ်းအနားအား ကျင်းပပြုလုပ်မည်
(၂၄)နှစ်ပြည့် ၈၈၈၈ နှစ်ပတ်လည်နေ့အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနားအဖြစ် ဝါဆို သင်္ကန်းကပ်လှူခြင်းနှင့် ၈၈၈၈ ဒီမိုကရေစီ အရေးတော်ပုံအတွင်း ထားဝယ်မြို့တွင် ကျဆုံးခဲ့ရသော 'ဆရာဦးပန်းကျော်၊ ဆရာဦးချမ်းလှ၊ ဦးတင်ရှိန်၊ မမူမူအေးနှင့် တနိုင်ငံလုံးတွင် ကျဆုံး အသက်စတေး ခဲ့ရသော သူရဲကောင်းတို့အား ဂုဏ်ပြုအောက်မေ့သော အားဖြင့် အလှူဒါနပြု ရေစက်ချအမျှဝေခြင်း အခမ်အနားအား ထားဝယ်မြို့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်မည် ဖြစ်ပါသည်။
ထားဝယ်မြို့မှာ ကျင်းပပြုလုပ်မည့် ၈၈၈၈လုံး နှစ်ပတ်လည် အခမ်းအနားသို့ ရန်ကုန်မြို့မှ ရောက်ရှိလာမည့် (၈၈)မျိုးဆက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များ ဒေသခံပြည်သူလူထုတို့ တွေ့ဆုံ နှုတ်ဆက်မည့်
at 8/04/2012 10:57:00 PM No comments:
ဟင်္သာတမြို့မှ ရဲတွေကိစ္စ၊ သစ်ကိစ္စ၊ ဖဲဝိုင်းကိစ္စ စသည့်တိုင်းတန်းချက်များ အင်တာနက်ပေါ်ပါလာပြီး နောက်နေ့များတွင် ဟင်္သာတမြို့ ပေါ်ရှိ GSMနှင့် CDMA ဖုန်းလိုင်းများမှာ တုံးအပြည့် မိနေပါလျှက်နှင့် စကားပြောနေရင်းနဲ့ လိုင်းကျကျသွားတဲ့ အဖြစ်များ ကြုံတွေ့နေရပါတယ်..။ ကျွန်တော်တို့လို ဝန်ထမ်းတွေ အနေနဲ့ (မသိရင် အထက်လူကြီးနဲ့ ပြောတဲ့ ၀န်ထမ်းအချို့ အတွက်
at 8/04/2012 10:53:00 PM No comments:
၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရ တိုင်းရင်းသားပါတီတွေနဲ့ သမ္မတ ပထမဆုံးအကြိမ်တွေ့မည်
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်နဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမယ့် နိုင်ငံရေးပါတီ ၁၄ ပါတီထဲမှာ ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ အနိုင်ရခဲ့တဲ့ တိုင်းရင်းသားပါတီတွေက ကိုယ်စားလှယ်တွေဟာ မနက်ဖြန်မှာ ပျဉ်းမနား နေပြည်တော်ကို အရောက်သွားရမယ်လို့ စုံစမ်းသိရှိရပါတယ်။
၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁၈ ရက်က နေပြည်တော်တွင် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်နှင့် နိုင်ငံရေးပါတီ ၁၀ ခုမှ ခေါင်းဆောင်များ တွေ့ဆုံစဉ်။
အခုလို တွေ့ဆုံတာဟာ ပထမဆုံးအကြိမ် ဖြစ်သလို ဦးသိန်းစိန် အစိုးရအနေနဲ့ လူထုနဲ့ ပိုမို ချဉ်းကပ်လာတာ တွေ့ရတယ်လို့ ရှမ်းအမျိုးသားများ ဒီမိုကရေစီ ပါတီရဲ့ ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် ဦးစိုင်းလိတ်က ဆိုပါတယ်။
at 8/04/2012 05:09:00 PM No comments:
ကိုမင်းကိုနိုင် အပါအဝင် ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင် (၄) ဦးဟာ ပဲခူးတိုင်း ပြည်၊ ရွှေတောင်၊ နတ်တလင်း၊ ပေါင်းတည် စတဲ့ မြို့တွေကို သွားရောက်ပြီး ပွင့်လင်း လူ့အဖွဲ့အစည်းနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အကြောင်းတွေကို ဆွေးနွေး ဟောပြောကြောင်း သိရပါတယ်။
at 8/04/2012 05:07:00 PM No comments:
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ဒီကနေ့ သူ့ရဲ့ မဲဆန္ဒနယ်ဖြစ်တဲ့ ကော့မှူးမြို့နယ်ကို သွားရောက်ပြီး ဒေသခံတွေနဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။
at 8/04/2012 05:06:00 PM No comments:
မလေးရှား ရခိုင်အမျိုးသားပိုင် မြန်မာ ဥယာဉ် စားသောက်ဆိုင်ကို ဘင်္ဂလီ ရိုဟင်ဂျာများ ၀င်ရောက်တိုက်ခိုက်
မလေးရှားနိုင်ငံ ကွာလာလမ်ပူမြို့ရှိ ရခိုင်အမျိုးသားပိုင် မြန်မာ ဥယျာဉ် စားသောက်ဆိုင်ကို ရိုဟင်ဂျာ အမည်ခံ ဘင်္ဂလီ လူအုပ်စု တစ်ခုက သောကြာနေ့ ညနေပိုင်းက ၀င်ရောက် တိုက်ခိုက်သွားခဲ့သည်။
“ ကျွန်တော်ကြားတာက သူတို့ ဗလီဝတ်ပြု အပြီးမှာ မြန်မာ သံရုံးကို သွားဆန္ဒပြတယ်လို့ ကြားတယ်။ အဲဒီကနေ မြို့ထဲကို ပြန်ဝင်လာပြီး လမ်းမှာတွေ့တဲ့ ရခိုင်တွေကို ရိုက်တယ်။ ဆွဲထိုးတယ်။ ရခိုင်လေးတွေကလည်း အနီးအနားမှာရှိတဲ့ ကျွန်တော်တို့ဆိုင်ကို တက်ပြေးကြတယ်။ အဲဒီမှာ နောက်က လိုက်လာပြီး ရခိုင်ဆိုင်လို့ သိသွားတာနဲ့ ပစ္စည်းတွေကို ဖျက်ဆီးတယ်။ ခုံတွေကို ရိုက်ချိုးတယ်။ ဆိုင်မှာ ရောင်းနေတဲ့ ကွန်ပျူတာတွေကိုလည်း မချသွားကြပါတယ်” ဆိုင်ပိုင်ရှင် ဦးစောအောင်က နိရဉ္စရာသို့ ပြောသည်။
မြန်မာ့သွင်းကုန် ပိတ်ပင်တားမြစ်မှု အပါအဝင် အခြား အရေးယူ ပိတ်ဆို့မှုများကို သုံးနှစ် ထပ်မံ သက်တမ်းတိုးရန် အမေရိကန် အောက်လွှတ်တော်က ကြာသပတေးနေ့က မဲခွဲဆုံးဖြတ်ခဲ့သည့်အပေါ် မြန်မာ့အရေး လှုပ်ရှားနေသည့် အမေရိကန်အခြေစိုက် US Campaign for Burma (USCB) က ကြိုဆိုလိုက်သည်။
တရားဥပဒေ စိုးမိုးမှု မရှိသည့် စနစ်အောက်တွင် လူ့အဖွဲ့အစည်းနှင့် တိုင်းရင်းသား လူနည်းစုများအပေါ် ရာဇဝတ်မှုများ ဆက်လက် ကျူးလွန်နေကြသော အုပ်ချုပ်သူ အပေါ်ယံအလွှာ၊ စစ်ဘက်နှင့် အာဏာပိုင်များနှင့် ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်နေ သည့် စီးပွါးရေးသမားများအပေါ် ဒဏ်ခတ်အရေးယူမှုများအား သက်တမ်းတိုးလိုက်သည့် အမေရိကန်၏ ဆောင်ရွက် ချက်ကို USCB က ကြိုဆိုလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
at 8/04/2012 05:04:00 PM No comments:
အလုပ်သမား ဆန္ဒပြမှု စုံစမ်းရေး ကော်မရှင်ဖွဲ့ရန် အဆို ပယ်ချခံရ
အလုပ်သမားများ၏ လုပ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာ ဆန္ဒဖော်ထုတ်မှုများနှင့်ပတ်သက်သည့် စုံစမ်းရေးကော်မရှင်တရပ် ဖွဲ့စည်းရေးအဆိုကို သြ ဂုတ်လ ၁ ရက်၌ ကျင်းပသော ပြည်သူ့လွှတ်တော် အစည်းအဝေးက ပယ်ချလိုက်သည်။
ယခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၂ ရက်က ဆန္ဒပြနေသော လှိုင်သာယာ စက်မှုဇုန်ရှိ တိုင်ရီ ဖိနပ်စက်ရုံ အလုပ်သမားများ (ဓာတ်ပုံ – ဧရာဝတီ)
ယင်းအဆိုကို သင်္ဃန်းကျွန်း မဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးသိန်းညွန့်က တင်သွင်းခြင်း ဖြစ်ပြီး နိုင်ငံရေးအရ ရောယှက်မှု မပြုသင့်ဘူးဟု ဆိုကာ မဲခွဲဆုံးဖြတ်ရာမှ ပယ်ချခံခဲ့ရခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ပထမအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် စတုတ္ထပုံမှန်အစည်းအဝေး ၁၉ ရက်မြောက်နေ့တွင် ဦးသိန်းညွန့်က“မကြာခင်က ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးရှိ စက်ရုံ အလုပ်ရုံ တချို့ အပါအ၀င် အလုပ်သမားများ၏ လုပ်ငန်းခွင် ဆိုင်ရာ ဆန္ဒဖော်ထုတ်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ ဖြစ်ပွားရသော လက်ငင်း အကြောင်းအရင်းနှင့် အရင်းခံ အကြောင်းရင်းများကို လေ့လာပြီး နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကို မထိခိုက်စေဘဲ အဖြေရှာစေနိုင်ရန် အတွက် အများကြည်ညိုလေးစားပြီး ယုံကြည်လောက်သော ပုဂ္ဂိုလ်များ ပါဝင်သည့် အလုပ်သမား ဆန္ဒဖော်ထုတ်မှုများနှင့် ပတ်သက်သော စုံစမ်းရေး ကော်မရှင်တရပ် ဖွဲ့စည်းရန် ပြည်ထောင်စု အစိုးရအား ဤလွှတ် တော်မှ တိုက်တွန်းကြောင်း”အဆိုတင်သွင်းသည်ဟု ယမန်နေ့ထုတ် အစိုးရ သတင်းစာများ၌ ဖော်ပြထားသည်။
at 8/03/2012 02:35:00 PM No comments:
မြန်မာစစ်တပ်ကို အိန္ဒိယ ကူမည်
ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဒု-ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ဗုဒ္ဓဂယာရှိ မဟာဗောဓိ ကျာင်းသို့ သွားရောက်စဉ် (ဓာတ်ပုံ- Getty Images)
တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်၏ အိန္ဒိယသို့ ရောက်နေစဉ် အိန္ဒိယအစိုးရက အိမ်နီးချင်းမြန်မာနိုင်ငံကို စစ်ရေးအရ ကူညီမှုများ တိုးမြှင့်ပေးအပ်ရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။
“မဟာဗျူဟာကျသော လှုပ်ရှားမှုတရပ်အဖြစ် မြန်မာစစ်တပ်ကို သင်တန်းများတိုးမြှင့်ပေးရန်နှင့် လက်နက်မဟုတ်သော စစ်သုံးပစ္စည်းများပေးအပ်ရန် အိန္ဒိယက ဆုံးဖြတ်လုိုက်သည်” ဟု အိန္ဒိယသတင်းစာ ဟင်ဒူစတန်တိုင်းမ် ရေးသားထားသည်။
မြန်မာစစ်တပ်တွင် အသုံးပြုရန်အတွက် တောတွင်းသုံး မြေထိုး၊ မြေကော်စက်များနှင့် အခြားအသုံးအဆောင်များကိုလည်း ပေးအပ်မည်ဟု ဆိုသည်။
အိန္ဒိယအနေဖြင့် နှစ်နိုင်ငံ နယ်စပ်ဒေသရှိ အိန္ဒိယခွဲထွက်ရေးသူပုန်အဖွဲ့များကို အပြီးတိုင် ခြေမှုန်းလိုနေရာ နယ်စပ်ဒေသလုံခြုံရေးအတွက် နှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ရေးကို တိုးမြှင့်လိုကြောင်း အဆိုပါသတင်းတွင် ဖော်ပြထားသည်။
နိုင်ငံရေးတွင် အမျိုးသမီးများ ပိုမိုပါဝင်နိုင်ရေး ဆွေးနွေး
မြန်မာ့နိုင်ငံရေးတွင် အမျိုးသမီးများ ထိရောက်စွာ ပိုမို ပါဝင်လုပ်ဆောင်ရေးအတွက် ကရင်အမျိုးသမီးများ ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ (KWAG )နှင့် လက်ရှိ လွှတ်တော်သို့ တက်ရောက်နေသော တိုင်းရင်းသူ အမျိုးသမီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အချို့က ဇူလိုင် (၃၁)ရက်တွင် နေပြည် တော်၌ အလွတ်သဘော ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
ထိုတွေ့ဆုံမှုနှင့် ပတ်သက်၍ KWAG မှ စီမံခန့်ခွဲမှု ဒါရိုက်တာ နော်စူစဲနာလှလှစိုးက “အမျိုးသမီးတွေ နိုင်ငံရေးမှာ ပိုမိုပါဝင် လုပ်ဆောင်နိုင် ဖို့ ရည်ရွယ်ပါတယ်။ လွှတ်တော်ထဲမှာလည်း အမျိုးသမီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေအနေနဲ့ ပိုမိုပါဝင်လုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့၊ လွှတ်တော်ထဲ မှာ အမျိုးသမီးကာကွယ်ရေး ဥပဒေတွေကို ဘယ်လိုတင်ပြဆွေးနွေးမလဲ ဆိုတာတွေကို ဆွေးနွေးဖြစ်တယ်”ဟု ပြောသည်။
at 8/03/2012 02:31:00 PM No comments:
Labels: စစ်ရေး, သတင်း
X2O သင်္ကြန်မဏ္ဍပ်ဗုံးဖေါက်ခွဲမှုနဲ့ သေဒဏ်ချမှတ်ထားခြင်းခံထားရသူ ကိုဖြိုးဝေအောင်အား ယနေ့ နေ့လည် ၁၂ နာရီခန့်တွင် အာဏာပိုင်များက ပြန်လည်လွှတ်ပေးလိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း မိသားစုဝင်များက ပြောသည်။
၂၀၁၀ ဧပြီလ ဗုံးပေါက်ကွဲမှုကြောင့် ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီး မေလ ၂၀၁၂ တွင် ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံခဲ့ရသော ကိုဖြိုးဝေအောင်သည် ကင်ဆာ ရောဂါလည်း ခံစားနေရပြီး အောက်ပိုင်းသေနေ၍ အင်းစိန် ဆေးရုံ တွင် ဆေးကုသ ခံနေရသူဖြစ်သည်။
at 8/03/2012 02:17:00 PM No comments:
ဒု သမ္မတနှင့် အဖွဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်ရောက်
အာဇာနည်နေ့အခမ်းအနား တက်လာသော ဒုသမ္မတ ဒေါက်တာ စိုင်းမောက်ခမ်း၊ ဓာတ်ပုံ- Reuters
ဒု သမ္မတ ဒေါက်တာ စိုင်းမောက်ခမ်းနှင့် အစိုးရ ၀န်ကြီးတချို့ပါဝင်သော အဖွဲ့သည် ယနေ့ နံနက် ၈ နာရီ ၄၅ မိနစ်ခန့် တွင် ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်တွေမြို့ သို့ ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီး ရဟတ်ယာဉ်ဖြင့် မောင်းတောမြို့သို့ ဆက်လက်ထွက်ခွာ သွားကြောင်း ပြည်နယ်အစိုးရ၏ ရခိုင်ပြည်နယ် ပဋိပက္ခများ ဆိုင်ရာ ပြောခွင့်ရ ဦးဝင်မြိုင်က ဧရာဝတီကို ပြောပါတယ်။
ဒု သမ္မတနှင့် အဖွဲ့ သည် ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ပဋိပက္ခဖြစ်မှုများကြောင့် ဒုက္ခရောက်သူများအား အကူအညီပေးရေး၊ ပြန် လည် ထူထောင်ရေးနှင့် ပျက်ဆီးသွားသည့် အိုးအိမ်များ ပြန်လည် တည်ဆောက်ပေးရေး ကိစ္စများအတွက် လေ့လာဖို့ လာရောက်တာလို့လည်း သိရပါတယ်။
at 8/03/2012 02:14:00 PM No comments:
နေပြည်တော်ကို ရောက်ချင်နေတဲ့ ကျွဲဖြူလေး
ကျွဲဖြူလေး၊ ဓာတ်ပုံ- အိမ့်သံစဉ်
တချိန်က စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေရဲ့ အလိုဆန္ဒတော်ကြောင့် ဆင်ဖြူတော်တွေလည်း တောတောင်တွေကို စွန့်၊ ကောင်း ကောင်း အိပ်၊ ကောင်းကောင်းစားပြီး နောက်ဆုံး နေပြည်တော်မှာ အပူဇော်ခံ တွေဖြစ် လာတော့တာပါဘဲ။
အခုလို ဆင်ဖြူတွေ ကောင်းစားတဲ့သတင်းက တိရိစ္ဆာန်လောက က အားကျကုန်ကြတယ်။ ဒါနဲ့ သူတို့ လည်း မွေးလာမယ့် သား၊ သမီးတွေကို အဖြူရောင်ဖြစ်ဖို့ ဆုတောင်းကြတယ်။
တခါတရံ စိတ်ကူးထဲမှာ သူတို့ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်မှာ ခရုသင်းရောဂါစွဲချင်တာ။ ဒါပေမယ့် ဆုတောင်းတိုင်း ဖြစ် လာတာ မဟုတ် တော့ သူတို့လည်း နေပြည်တော် အိပ်မက်နဲ့ ဝေးနေရတာပေါ့။
at 8/03/2012 02:12:00 PM No comments:
ရွှေမင်းသားဖောင်ဒေးရှင်းက ကချင်ပြည်နယ် စစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေအတွက် ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများ ထံသို့ ချိုင်းထောက်အစုံ (၃၀) နှင့် ဘီးတပ်ထိုင်ခုံ (၃) စီး လှူဒါန်းခြင်း အခမ်းအနား တခုကို လွန်ခဲ့တဲ့ သြဂုတ်လ ၁ ရက်နေ့က သင်္ကန်းကျွန်းမြို့နယ်ရှိ ဝေဇယန္တာလမ်းပေါ်က ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများရဲ့ ရုံးခန်းတွင် ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။
at 8/03/2012 02:11:00 PM No comments:
လျှပ်စစ် (၁) ၀န်ကြီးဦးဇော်မင်းရဲ့ ကိုယ်ကျိုးရှာမှု ကွန်ယက်ကြီးအကြောင်း ပေးစာများ
at 8/03/2012 02:08:00 PM No comments:
မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ဘက် နယ်စပ် ခြံစည်းရိုးခတ်ရုံနဲ့ မလုံခြုံနိုင်
ရခိုင်ပြည်နယ် အနောက်ဘက်နယ်စပ်မှာ နိုင်ငံတော် အစိုးရက ဒေသရဲ့ လိုအပ်ချက် အရ ဒေသန္တရ အုပ်ချုပ်ရေး စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းတွေကို အသီးသီး ချမှတ်ထားပေမယ့် အဲသလို ချမှတ်ထားတဲ့ အပေါ်မှာ နစက တာဝန်ရှိသူ အများအပြားဟာ လိုက်နာဖို့ ပျက်ကွက်ခဲ့တဲ့ အတွက် မောင်တောနဲ့ ဘူးသီးတောင် ဒေသဟာ အထိန်းအကွပ် မရှိ ဖြစ်ချင်တိုင်း ဖြစ်နေတယ်လို့ မောင်တောမြို့ တရားရုံး ရှေ့နေ တစ်ဦးက ပြောပါတယ်။
ယခင် နစကမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ် အောင်ကြီး အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များအား ဘွဲ့ခေါင်းပေါင်းများ ချီးမြှင့်နေစဉ်။ ယခုလို ဘာသာရေး ပွဲလန်းသဘင် တစ်ခု လုပ်ခွင့်အတွက် ကျပ်သိန်း ရာချီ၍ ပေးရကြောင်း သိရသည်။
မောင်တောမြို့နယ်နဲ့ ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်တွေမှာ ဘင်္ဂလီမွတ်ဆလင် အတော်များများဟာ အသက် ၁၈ နှစ် မပြည့်မီ အိမ်ထောင်ပြုကြပြီး ဇနီးမယားကိုလည်း တစ်ဦးကနေ သုံးလေးဦးထိ လက်ထပ် ယူတာကြောင့် ဒါတွေကို တားမြစ်ဖို့ လက်ထပ်ခွင့်တင်ပြီးမှ လက်ထပ်ခွင့် ပြုပေးဖို့ အထက်က ဒေသန္တာရ အမ်ိန့် ဆိုပြီး ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။
ခေတ်အဆက်ဆက် အဖိနှိပ်ခံနေရတဲ့ တောင်သူလယ်သမားတဦး၏ အိတ်ဖွင့်ပေးစာ...
at 8/03/2012 02:04:00 PM No comments:
ဘလော့ခ်ဂါ နေဘုန်းလတ်၏ "ကျွန်တော်လွတ်ကျခဲ့တဲ့ မြို့တော်" စာအုပ် မိတ်ဆက်ပွဲ....
ဘလော့ခ်ဂါ ဆရာ နေဘုန်းလတ်၏ "ကျွန်တော်လွတ်ကျခဲ့တဲ့ မြို့တော်" စာအုပ် မိတ်ဆက်ပွဲ Home House of Media တွင် ကျင်းပပြုလုပ်
၂-၈-၂၀၁၂ နေ့ ၂း၀၀ နာရီမှ ၄း၀၀ ထိ၊ ရန်ကုန်၊ ဗိုလ်အောင်ကျော် (အောက်) Home House of Media တွင် ဘလော့ခ်ဂါဆရာ နေဘုန်းလတ်၏ ပထမဦးဆုံးရေးသားထားသော "ကျွန်တော်လွတ်ကျခဲ့တဲ့ မြို့တော်" စာအုပ် မိတ်ဆက်ပွဲကို ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ "ကျွန်တော်လွတ်ကျခဲ့တဲ့ မြို့တော်" စာအုပ်သည် ကိုနေဘုန်းလတ် ဘလော့ခ် မလုပ်ခင်ကတည်းက စတင်ရေးသားခဲ့သော စာအုပ်ဖြစ်ခဲ့သောကြောင့် သူ၏ဘလော့ခ်အမည်ကိုလည်း "ကျွန်တော်လွတ်ကျခဲ့တဲ့ မြို့တော်" လို့ ပေးခဲ့ကြောင်း ကိုနေဘုန်းလတ်မှ ရှင်းပြပြောဆိုခဲ့ပါသည်။
at 8/03/2012 08:08:00 AM No comments:
အလုပ်သမားဆန္ဒပြမှု စုံစမ်းရေး ကော်မရှင် ဖွဲ့စည်းဖို့အဆို လွှတ်တော်က ပယ်ချ
ရန်ကုန်တိုင်း အလုပ်သမား ဆန္ဒပြမှုတွေအတွက် စုံစမ်းရေး ကော်မရှင် ဖွဲ့စည်းဖို့ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်
ကိုယ်စားလှယ် ဦးသိန်းညွှန့် တင်သွင်းထားတဲ့ အဆိုကို ဒီကနေ့ ပြည်သူ့လွှတ်တော်က ပယ်ချလိုက်ပါတယ်။
ပြည်သူ့လွှတ်တော်မှာ ဒီအဆိုကို ဆွေးနွေးကြပြီးနောက် မဲခွဲ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာ ဖြစ်ကြောင်း ဦးသိန်းညွန့်က ပြောပါတယ်။
"ဒီနေ့ ရန်ကုန်တိုင်းအလုပ်သမားရေးကိစ္စလေ၊ စုံစမ်းရေး ကော်မရှင်ဖွဲ့ဖို့ ကျွန်တော်တင်တာ၊ ကျွန်တော့်အဆိုကို NLD က မကွေးလွှတ်တော်
ကိုယ်စားလှယ် ဦးမြင့်သ်ိန်း ထောက်ခံတယ်။ နောက် NDF က အလုံလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ကိုခိုင်မောင်ရည် ထောက်ခံတယ်။
at 8/03/2012 08:03:00 AM No comments:
ဘင်္ဂလီအရေးလား လူ့အခွင့်အရေးလား - အပိုင်း (၁)
ဆောင်းပါးရှင် - ဗိုလ်မှူးကျော်ကျော်ခိုင်
နိုင်ငံတကာအမြင်မှာ မြန်မာနိုင်ငံဟာ ရှေးယခင်ကလို အနိုင်ကျင့်လို့ကောင်းတုန်း အချဉ်ဖမ်းလို့ကောင်းတုန်း နိုင်ငံတစ်ခုဘဲလို့ မြင်နေကြဆဲပဲနဲ့ တူပါတယ်။ သူခိုးက လူလိုဟစ် နေတာကိုတောင် ဝိုင်းဝန်းလက်ခုပ်တီး အားပေးနေကြပြန်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်ဖွား သစ္စာမဲ့သူများကလည်း ငွေကြေးအတွက်၊ နေရာတစ်ခုအတွက် ထမင်းတလုတ်အတွက်နဲ့ ပြဿနာကို မီးခွက်ထွန်း ရှာချင်နေကြပါတယ်။ ဘင်္ဂလီအရေး ပေါ်လာတာဟာ လုပ်စားနေသူတို့အတွက်တော့ ထမင်းအိုးကြီးတစ်လုံး ထပ်ချက်ပေးထားသလိုပါပဲ။ မယုံမရှိပါနဲ့။
ဘင်္ဂလီပြဿနာလား။ ရှင်းရှင်းလေးပါ။ ခိုးဝင်တယ်။ အဲဒီဒေသမှာ မူလနေထိုင်နေတဲ့ ရခိုင်လူမျိုးတွေက်ို စော်ကားတယ်။ လူသတ်တယ်။ မုဒိန်းကျင့်တယ်။ အဲဒီဘင်္ဂလီတွေကပဲ မူလဒေသခံ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများကို လူမျိုးတုန်း (Genocide) ဖြစ်လုနီးပါး သတ်ပစ်ပြီး ရခိုင်ပြည်နယ် နေရာလုယူဖို့ ကြံစည်တယ်။ မူဆလင်ဆိုတဲ့ ဘာသာရေးကို ဘန်းပြပြီး မူဆလင်တွေကိုပါ သူတုိ့နဲ့ ပါဝင်လာအောင်လုပ်တယ်။ အိန္ဒိယနယ်စပ်မှာလည်း ဒီအတိုင်းပဲ ဖြစ်နေတာပါ။ အိန္ဒိယမှာဆို ခိုးဝင်လာရင် မေးမြန်းစစ်ဆေးခြင်းမရှိ ပစ်တောင်သတ်ကြတာ မဟုတ်လား။
at 8/03/2012 08:02:00 AM No comments:
လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှု ပပျောက်ရေး ဥပဒေကြမ်းကို အမျိုးသားလွှတ်တော် အတည်ပြု
လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှု ပပျောက်ရေး ဥပဒေကြမ်းတွင် အမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုယ်စားများဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများအား ဖြည့်စွက်ပြီး အမျိုးသားလွှတ်တော်က သြဂုတ်လ ၁ ရက်နေ့တွင် အတည်ပြုခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှု ပပျောက်ရေး ဥပဒေကြမ်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အကြံပြု ဆွေးနွေးသည့် အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ညှိနှိုင်းခဲ့ရာ အောက်ပါအတိုင်း သဘောတူညီခဲ့ကြပါသည်။
ဦးခင်မောင်ရီ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် ၆ မှ ဆွေးနွေးချက်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍
၁။ ဤ ဥပဒေကြမ်း ပုဒ်မ ၂ ပုဒ်မခွဲ (က)တွင် လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှု ပြုလုပ်ရာ၌ အခွင့်အရေး တစ်စုံတရာ ရထိုက်သော ပုဂ္ဂိုလ်အား ထိုသို့ မရရှိအောင် ရာထူးတာဝန်ကို အလွဲသုံးစားပြု၍ ပိတ်ပင်ဟန့်တားခြင်းလည်း အကျုံးဝင်စေရန်အတွက် ဥပဒေနှင့်မညီသော အခွင့်အရေးပေးရန်သော် လည်းကောင်း၊ ဥပဒေနှင်အညီ ရထိုက်သော အခွင့်အရေးကို မမှန်မကန် ပိတ်ပင်ရန်(သို့)ကြန့်ကြာရန် သော်လည်းကောင်း၊ တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ သွယ်ဝိုက်၍ဖြစ်စေ ပြုလုပ်ခြင်းကိုဆိုသည်ဟု ထပ်မံဖြည့်စွက်ရန် သဘောတူညီခဲ့ကြပါသည်။
at 8/03/2012 08:01:00 AM No comments:
ခေါင်းဆောင်ကြီးများပြောကြတဲ့ တရားဥပဒေစိုးမိုးမှု ဆိုတာကို အကောင်အထည် ဖော်ပေးမှာက ဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
လွှတ်တော်ထဲမှာ ဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကို ထည့်သွင်း ဆွေးနွေးနေကြတာ သတင်းကောင်းပါပဲ။
ရဲတပ်ဖွဲ့အတွင်း ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး၊ အရည်အချင်း မြှင့်တင်ရေး၊ ခေတ်ပေါ်နည်းပညာအသုံးချရေး တို့ကိုတော့ ဆွေးနွေးချက်တွေထဲမှာ မတွေ့ရသေးပါဘူး။ (ဂုဏ်သိက္ခာ ဆိုတဲ့ထဲ အဲသဟာတွေ ပါသကွာလို့ ပြောလာရင်တော့ - ဟုတ်ကဲ့၊ ကြိုဆိုပါတယ်)
နိုင်ငံနဲ့ပြည်သူအတွက် အားကိုးရမယ့် ရဲတပ်ဖွဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာရှိရှိ ရပ်တည်လုပ်ကိုင်ဖို့ ဘတ်ဂျက် အများကြီး လိုမှာပါ။
at 8/03/2012 07:59:00 AM No comments:
ရခိုင်ဒေသအတွက် ရဲစခန်း ၃ဝ ထပ်ဖွင့်မယ်
စစ်တွေမြို့၊ ဇွန်လ (ဓာတ်ပုံ – ခင်သြ / ဧရာဝတီ)
ရခိုင်ဒေသမှာ ရဲစခန်း အရေအတွက် ၃ဝ ထပ်မံ တိုးချဲ့ ဖွင့်လှစ်ဖို့ စီစဉ်နေတယ် လို့ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးက အင်္ဂါနေ့မှာ ပြောလိုက်ပါတယ်။ လက်ရှိ စခန်းအရေအတွက်က ၇၅ ခု လို့ ဆိုပါတယ်။
အမျိုးသားလွှတ်တော်ရဲ့ ဇူလိုင် ၃၁ အစည်းအဝေးမှာ ဝန်ကြီး ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးကိုကိုက အဲဒီ အစီအစဉ်ကို ချပြလိုက်တာဖြစ်ပြီး အမတ်တဦး မေးမြန်းတဲ့ ရခိုင်ဒေသ လုံခြုံရေးအခြေအနေအကြောင်းကိုလည်း အကျယ်တ၀င့် ပြန်လည် ဖြေကြားသွားပါတယ်။
ရခိုင်ဒေသ လုံခြုံရေး အရေးကြီးပုံကို အာဏာပိုင်တို့ နားလည်သွားပြီလို့ ယူဆရပါတယ်။
ဘင်္ဂါလီလူမျိုးများ တရားမဝင် စိမ့်ဝင်ပျံ့နှံ့လာမှု၊ ကာလကြာမြင့်စွာ အခြေချနေထိုင်လာမှုတွေကြောင့် မောင်တော၊ ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်များမှာ ဘင်္ဂါလီ ၉၄ % နဲ့ တိုင်းရင်းသားက ၆ % ဖြစ်နေပြီ လို့ ဝန်ကြီးက ဆိုတယ်။ ဘယ်အစိုးရတွေလက်ထက်မှာ ဘာကြောင့် ဒီအချိုးအစား ဖြစ်သွားရတယ် ဆိုတာကိုတော့ ရှင်းထားတာ မတွေ့ရပါဘူး။
at 8/03/2012 07:58:00 AM No comments:
ကာတွန်း - မျိုးကြီးwww.facebook.com/myo.gyi.9081
at 8/03/2012 07:57:00 AM No comments:
မြိတ်- ကော့သောင်းလမ်းမှာ ဘာတွေ ဖြစ်နေလဲ ???
မြိတ်- ကော့သောင်း ကားလမ်းတလျှောက် လမ်းပိုင်းများပျက်စီးနေသည့် မြင်ကွင်များ
မြန်မာနိုင်ငံကြီးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နေပြီး လမ်းတံတားတွေ တည်ဆောက်ပြုပြင်နေကြတာကို ဆယ်စုနှစ် ၂ ခုလောက် စစ်အစိုးရ မင်းများက နေ့စဥင်္ နိုင်ငံပိုင် သတင်းတွေမှာ ဖော်ပြခဲ့တာ မှတ်မိနေကြမယ်ထင်ပါတယ်။
အခု လတ်တလောတော့ တနင်္သာရီတိုင်းက မြိတ်နဲ့ ကော့သောင်း ကားလမ်းအခြေအနေတွေ ကတော့ တော်တော် ပျက်စီး နေတာကြောင့် ခရီးသွားပြည်သူတွေ စိတ်သောက ရောက်နေကြတာ ဓာတ်ပုံတွေ မြင်တာနဲ့ သိရှိခံစားလို့ ရနိုင်မယ် ထင်ပါတယ်။
ကျိန်ခရန်ကျေးရွာနှင့် တန်ဖဲကျေးရွာ ( မြစ်ဆုံဒေသ)တွင် သစ်ခိုးထုတ်ယူခြင်း
အောင်မြင်သာကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး- Myitung Naw Ja နှင့် ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေး စည်းရုံးရေးမှူး La Ram တို့ဦးဆောင်ပြီး အောင်းမြင်သာ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် စာကြည့်တိုက် ပြုလုပ်ရန် အကြောင်းပြ လိမ် လည် ပြောဆိုပြီး မိမိ ကိုယ်ကျိုး အတွက် ရွာသားများကို မတိုင်ပင်ဘဲ ကျိန်ခရန်-မြစ်ဆုံဒေသမှ သစ်များကို ခိုးထုတ်နေကြတယ်လို့ ဒေသခံ တဦးက ဧရာဝတီ ကို စာရေးသားပေးပို့လာပါတယ်။
ထို သစ်ခိုးထုတ်ခြင်းကို ရွာသားများမည်သူမှ သဘောတူခြင်းမရှိပါ။ စာကြည့်တိုက်၏ တန်ဖိုးထက် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ပျက်စီးသည့် တန်ဖိုးက ပိုများသည်။ ကျေးရွာတွင် အသုံးပြုရမည့် သစ်များလည်း ကုန်ဆုံးသွားမည်။
at 8/03/2012 07:56:00 AM No comments:
ကွန်ပြူတာကို လေ့လာရာတွင် အသုံးဝင်မည့် နည်းလမ်းများ
ကျွန်တော်တို့ဟာ ကွန်ပျူတာနဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုတဲ့ Programmer, Software Developer, Network Engineer, Designer စတဲ့သူတွေ မဟုတ်ခဲ့ရင်တောင် ကွန်ပျူတာနဲ့ မကင်းနိုင်ပါဘူး။ ဒီနေရာမှာ ကျွန်တော့်ကို ကွန်ပျူတာနဲ့ အိုင်တီကို Self Study လုပ်ဖြစ်သွားစေတဲ့ အတွေးလေးတစ်ခုကို ဝေမျှချင်ပါတယ်။
" ပိုက်ဆံရှိရင် ကွန်ပျူတာ ၀ယ်လို့ရတယ်။တနည်းအားဖြင့် ပိုက်ဆံရှိရင် ကွန်ပျူတာဆိုတာ ရှိနိုင်တယ်။
ဒါပေမဲ့ ပိုက်ဆံရှိတိုင်း ကွန်ပျူတာ သင်ပေးနိုင်တဲ့သူ မတွေ့နိုင်ဘူး။ မရှိနိုင်ဘူး။
ကွန်ပျူတာ ရှိတိုင်းလည်း ကွန်ပျူတာ သင်ပေးနိုင်တဲ့သူ မတွေ့နိုင်ဘူး။ မရှိနိုင်ဘူး။
ကွန်ပျူတာ ရှိတဲ့နေရာတိုင်းမှာ သင်ပေးနိုင်တဲ့သူ မရှိနိုင်ဘူး။ ကိုယ်လုပ်နိုင်သလောက် လေ့လာရင် လေ့လာသလောက် ကိုယ်ပြန်ရမယ်..."
ဒါဟာ ကျွန်တော့်ရဲ့ ပုဂ္ဂလိက ခံယူချက်ဖြစ်ပြီး အခွင့်သာတိုင်းလည်း အခြားသူများကို ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
at 8/03/2012 07:55:00 AM No comments:
သတင်းဂျာနယ်များပိတ်ပင်မှုနှင့် မတရားသော မီဒီယာဥပဒေဆန့်ကျင်ရေး ကော်မတီဖွဲ့စည်း
သတင်းဂျာနယ်များပိတ်ပင်မှုနှင့် မတရားသော မီဒီယာဥပဒေဆန့်ကျင်ရေး
၁။ ပိတ်ပင်ခံထားရသော The Voice Weekly , Envoy ၊ လျှပ်တပြက်ဂျာနယ်တို့ကို
၂။ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများကို ထိခိုက်စေသည့်နောက်ပြန်ဆွဲသော
မည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်၊ မည်သည့်လုပ်ရပ်မျိုးကိုမဆို အရေးယူဖယ်ရှားပေးရန်။
၃။ ၁၉၆၂ ခုနှစ် ပုံနှိပ်အက်ဥပဒေနှင့်မီဒီယာများကို ဖိနှိပ်ကန့်သတ်ထားသော
at 8/03/2012 07:53:00 AM No comments:
မုံရွာမြို့နယ် ဇလုပ်ကျေးရွာ အနောက်ပိုင်း နေထိုင်သူ မောင်အောင်ဆန်းဝင်းအား မုံရွာစီးပွားရေး တက္ကသိုလ် ပြင်ပအဆောင်နေ ကျောင်းသားအချို့က ယမန်နေ့ညပိုင်းက ၀ိုင်းဝန်းရိုက်နှက် ခဲ့မှုကြောင့် မကျေနပ်သော ဇလုပ်ကျေးရွာ ဆရာတော်များနှင့် ကျေးရွာသူ ကျေးရွာသား (၅၀)ခန့်သည် မုံရွာစီးပွားရေး တက္ကသိုလ်အနီး ပြင်ပဘော်ဒါ ဆောင်များတွင် ရိုက်နှက်သူများကို လိုက်လံရှာဖွေခဲ့ပြီး မုံရွာစီးပွားရေး တက္ကသိုလ်အနောက် ဘက်ရှိ အီကိုကင်း အမျိုးသားဘော်ဒါ ဆောင်အားဝိုင်းထားစဉ် မုံရွာမြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် တာဝန်ရှိသူများ၊ မုံရွာမြို့နယ် သံဃာ့နာယက ဆရာတော်ကြီးများ ရောက်ရှိလာပြီး အခြေအနေအားလုံး ထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့ ကြောင်းသတင်းရရှိသည်။
at 8/02/2012 10:00:00 PM No comments:
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် (ဓာတ်ပုံ – ဧရာဝတီ)
ဒီမိုကရေစီ စနစ်နှင့်အညီ လွတ်လပ်စွာ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ တက္ကသိုလ်များ ပေါ်ထွန်းရေးအတွက် ခေတ်စနစ်နှင့် ကိုက်ညီမည့် ဥပဒေသစ် တရပ် ရေးဆွဲ ပြဌာန်းသွားမည်ဟု သိရသည်။
ပြည်သူ့လွှတ်တော် ပညာရေးမြှင့်တင်မှု ကော်မတီက တင်သွင်းသော ၂၀၁၂ ခုနှစ် တက္ကသိုလ် ပညာရေး ဥပဒေကြမ်းသည် ခေတ်စနစ်နှင့် အံဝင်ခွင်ကျမှု မရှိသဖြင့် ပယ်ဖျက်ပေးရန် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များ ဖြစ်ကြသည့် ဒေါ်တင်နွယ်ဦး၊ သူရ ဦးအောင်ကိုတို့က တောင်းဆိုခဲ့ကြပြီး၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်ရန် လိုအပ်ကြောင်း ယမန်နေ့က ဆွေးနွေးတင်ပြရာ လွှတ်တော်က သဘောတူခဲ့သည်။
at 8/02/2012 09:57:00 PM No comments:
ဆန္ဒပြခွင့် ပိတ်ပင်သူတို့ကို လယ်သမားများက တရားစွဲရန် ပြင်ဆင်
ဧရာဝတီတိုင်း၊ လပွတ္တာမြို့နယ်ရှိ လယ်သမားများက အသိမ်းခံခဲ့ရသည့် ၎င်းတို့၏ လယ်မြေ များ ပြန်လည်ရယူလိုကြောင်း ဆန္ဒပြခွင့် တောင်းဆိုမှုအား မြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးတို့က အကြိမ်ကြိမ်
ငြင်းပယ်ခဲ့၍ ၎င်းတာဝန်ရှိသူများအား ဥပဒေကြောင်းအရ တရားစွဲဆိုရန် လယ်သမားများက ပြင်ဆင်လျက်ရှိသည်ဟု လယ်သမားများ၏ ဥပဒေရေးရာ အတိုင်ပင်ခံ ကိုဖိုးဖြူ က ပြောသည်။
at 8/02/2012 09:55:00 PM No comments:
“ ဖြစ်တာက သဲချောင်းကို ဖြတ်ပြီ မန်ဇီဘက်က မွတ်ဆလင် ဒုက္ခသည် စခန်းတွေဆီကို ဆန်သွားပို့တဲ့ ကားကို ၀ိုင်းပြီး လမ်းကနေတားကြပါတယ်။ အဲသလို တားဆီးတာကို
at 8/02/2012 09:52:00 PM No comments:
ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ်ဟောင်း ဦးသန့်ပြတိုက် တည်ဆောက် သွားမည်
ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ်ဟောင်း ဦးသန့်၏ ပြတိုက်ကို ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ပန်းတနော် မြို့သစ်၊ ရန်ကုန်- ပုသိမ် လမ်းမကြီးဘေးရှိ ပေ (၄ဝx ၁၂ဝ) မြေကွက်ပေါ်တွင် ဆောက်လုပ်သွားမည် ဖြစ်ပြီး စုစုပေါင်း ငွေကျပ် သိန်း (၂၀၀၀) မျှ ကုန်ကျမည်ဟု ခန့်မှန်း ထားကြောင်း ဦးသန့် ပြတိုက်နှင့် ရုပ်တု တည်ဆောက်ရေး အဖွဲ့၏ တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးက ထုတ်ဖော် ပြောကြားခဲ့သည်။
at 8/02/2012 09:45:00 PM No comments:
ရှစ်လေးလုံးမျိုးဆက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုကိုကြီးသို့ စစ်အာဏာရှင်တို့၏ ကြိုးပေးကွပ်မျက်ခြင်းခံခဲ့ရသည့် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ဆလိုင်းတင်မောင်ဦး မိသားစုမှ အိတ်ဖွင့်ပေးစာ
ရှစ်လေးလုံးမျိုးဆက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုကိုကြီးသို့
ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ဆလိုင်းတင်မောင်ဦး မိသားစုမှ အိတ်ဖွင့်ပေးစာ
ရှစ်လေးလုံးမျိုးဆက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုကိုကြီးရှင့် ...
အိပ်ဖွင့်ပေးစာ ရေးသားပေးပို့လိုက်ပါတယ်။ ကျမကတော့ ကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှု၊ လူထုဆန္ဒပြပွဲတွေကို ဦးဆောင်ရင်း စစ်အစိုးရရဲ့ ကြိုးပေးကွပ်မျက်မှုခံလိုက်ရလို့ ကျဆုံးသွားတဲ့ (၁၉၇၄- ၁၉၇၆ မျိုးဆက်) ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ဆလိုင်းကိုတင်မောင်ဦးရဲ့ ညီမ မလှမြိုင် (ခေါ်) မိုင်ပိုပိုတင် ဖြစ်ပါတယ်။
at 8/02/2012 09:39:00 PM No comments:
အငြိမ်းစားဗိုလ်ချုပ်ကြီး သူရဦးတင်ဦး၏ စစ်မှုထမ်း ဘ၀ ရခိုင်ပြည်နယ် အတွေ့အကြုံ (အပိုင်း - ၁)
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချူပ်ရဲ့ နာယက တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ မြန်မာ့တပ်မတော်ရဲ့ စတုတ္ထမြောက် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူ အငြိမ်းစားဗိုလ်ချုပ်ကြီး သူရ ဦးတင်ဦးကို ၁၉၄၈ လွတ်လပ်ရေးခါနီးအချိန်က စတင် ခဲ့တဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့ မတည်မငြိမ်အခြေအနေတွေနဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ သူ တာဝန်ထမ်းဆောင်စဉ်က အတွေ့အကြုံ တွေကို ဦးရော်နီညိမ်း က မေမြန်းဆွေးနွေးပြီး ဒီသီတင်းပတ်ရဲ့“တပ်မှူးတပ်သား ပြောစကား” ကဏ္ဍကို တင်ဆက် လိုက်ပါတယ်။
at 8/02/2012 09:36:00 PM No comments:
ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်အတွက် စာတစ်စောင်
မိုက်ကယ်ကတော့ “ကျွန်တော်တို့ နေနေတဲ့နေရာကို အိန္ဒိယမြေပုံပေါ်မှာ ရှာကြည့်ပါလား။ ဟိုးအပေါ် ဘက်မှာလေ။ နိုရီကိုရဲ့ ခရစ်စမတ် ကတ်လေး မနေ့ကရတော့ သိပ်ဝမ်းသာတာပဲ။ ခင်ဗျားရဲ့ သဘောကျစရာ ဟင်းချက်လက်ရာကိုရော၊ ခင်မင်စွာ အတူရှိခဲ့မှုကိုပါ ပြန်အောက်မေ့စရာပါပဲ။ ကျွန်တော့် ပါရဂူဘွဲ့စာတမ်းက မကြာသေးခင်ကမှ ပြီးသွားတာပါ။ စာတမ်းကိုတော့ ဒီနှစ်ထဲမှာ စာအုပ်အဖြစ် ထွက်မယ်လေ။ ပြီးရင် စိန့်ဂျွန်းကောလိပ်မှာ ဖဲလိုးရှစ် တစ်နှစ်ခွဲပြန်လုပ်ရဦးမယ်။ ကျွန်တော်တို့လည်း အောက်စ်ဖို့ဒ်မှာ အိမ်ဝယ်ဖို့ စဉ်းစားနေပါတယ်။ အဲဒီမှာပဲ အမြဲတမ်း အခြေချနေချင် တယ်လေ။ နှစ်ယောက်လုံးကို ချစ်ခင်တဲ့ မိုက်ကယ်”လို့ စာရေးလာပါတယ်။
at 8/02/2012 09:33:00 PM No comments:
" အချိုးကျ ကိုယ်စားပြု ရွေးကောက်ပွဲ စနစ်လေ့လာရန် ပါတီ ကိုယ်စားလှယ်များအား ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ညွှန်ကြား"
အချိုးကျ ကိုယ်စားပြုရွေးကောက်ပွဲ စနစ် ပြောင်းလဲရန် တင်ပြထားသည့် ကိစ္စအား ကြိုတင် လေ့လာထား ရန် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ၄င်း၏ ပါတီကိုယ်စားလှယ် များကို အဖွဲ့ချုပ် သီးသန့် အစည်းအဝေးတွင် ပြောကြား လိုက်ကြောင်း သိရသည်။ PR(Proportional Representation ) နှင့် ပတ်သက်၍ ဒီမို ကရက် တစ် ပါတီ ၁ဝ ပါတီနှင့် နိုင် ငံတော်သမ္မတ၊ ပြည်သူ့ လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ တို့နှင့် တွေ့ ဆုံပြီး သည့်နောက် ပိုင်းတွင် အဖွဲ့ချုပ် အနေဖြင့် ကြိုတင် လေ့လာမှု များ ပြုလုပ်ထားရန်နှင့် လွှတ်တော်တွင် အဆိုတင်သွင်း မှုများ၊ မေးမြန်းတင်သွင်းချက်များနှင့် ဆက်စပ်၍ သတိထား လုပ်ဆောင်သွား ကြရန် ၄င်းက တိုက်တွန်းပြော
ကြား ခဲ့ကြောင်း ပြည်သူ့ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးဝင်းထိန် က ပြောသည်။
at 8/02/2012 09:30:00 PM No comments:
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နှင့် မစ္စတာ ကွင်တားနား တို့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေး ကိုယ်စား လှယ် မစ္စတာ ကွင်တားနား (Tomas Ojea Quintana)တို့ ဒီကနေ့ သြဂုတ်လ ၂ရက်နေ့ နံနက် ၉း၃၀ မှ ၁၁း၀၀ အချိန်ထိ ရန်ကုန်မြို့ တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းရှိ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏နေအိမ်တွင် တွေ့ဆုံ
at 8/02/2012 09:29:00 PM No comments:
သတင်း လွတ်လပ်ခွင့်ကော်မတီ(ယာယီ)၏ ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်
၁။ ပိတ်ပင်ခံထားရသောThe Voice Weekly, Envoy၊ လျှပ်တပြက်ဂျာနယ်တို့ကို ချက်ချင်း ထုတ်ဝေခွင့်ပေးရန်။
၂။ ပြုပြင်၊ ပြောင်းလဲမှုများကို ထိခိုက်စေသည့် နောက်ပြန်ဆွဲသော မည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်၊ မည်သည့် လုပ်ရပ်မျိုးကိုမဆို အရေးယူ ဖယ်ရှားပေးရန်။
၃။ ၁၉၆၂ ခုနှစ် ပုံနှိပ်အက်ဥပဒေနှင့် မီဒီယာများကို ဖိနှိပ်ကန့်သတ်ထားသော ဥပဒေများကို
at 8/02/2012 03:11:00 PM No comments:
လယ်ယာမြေ သိမ်းဆည်းခံရသူများ အရေး စုံစမ်းရေး ကော်မရှင် ဖွဲ့စည်းမည့်အပေါ် ၈၈မျိုးဆက် ကျောင်းသားများနှင့် တောင်သူလယ်သမား အရေး ဆောင်ရွက်သူများ၊ ဥပဒေပညာရှင်များ၏ ပူးတွဲထုတ်ပြန်ချက်..
လယ်ယာမြေ သိမ်းဆည်းခံရခြင်းအား လေ့လာစုံစမ်း ဖော်ထုတ်ရန် ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်က စုံစမ်းရေး ကော်မရှင် ဖွဲ့စည်းမည့်အပေါ် ၈၈မျိုးဆက် ကျောင်းသားများနှင့် တောင်သူလယ်သမား အရေး ဆောင်ရွက်သူများ၊ ဥပဒေပညာရှင်များ၏ ပူးတွဲထုတ်ပြန်ချက်အား ယနေ့(၁၊၈၊၂၀၁၂နေ့)တွင် အောက်ပါပုဂ္ဂိုလ်များက လက်မှတ်ရေးထိုး ထုတ်ပြန်လိုက်
at 8/02/2012 03:09:00 PM No comments:
ပြသချိန် ၁ နာရီခွဲကြာမယ့် သူ့ရဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အကြောင်း မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ဟာ ရိုက်ကူးရေးအနေနဲ့ အခုမှ အစပဲ ရှိသေးတဲ့အကြောင်းကို မင်းထင်ကိုကိုကြီးက “၂၁ ရက်နေ့ကမှ
at 8/02/2012 02:56:00 PM No comments:
သည်ဗွိုက်ဂျာနယ် ထုတ်ဝေခွင့် ရပ်ဆိုင်းခံရသည့်အပေါ် မေးမြန်းချက်
အစိုးရက ပြည်တွင်း အပတ်စဉ်ထုတ် သည်ဗွိုက်ဂျာနယ်နဲ့ အင်ဗွိုင်းဂျာနယ်တို့ကို ထုတ်ဝေခွင့် ယာယီရပ်ဆိုင်းလိုက်ပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ ဇွန်လကုန်မှာ ဖျက်သိမ်းပါတော့မယ်လို့ အများသိ ကြေညာထားပေမယ့် ဆက်လက်တည်ရှိနေဆဲဖြစ်တဲ့ စာပေစိစစ်နဲ့ မှတ်ပုံတင်ဌာနက ရပ်ဆိုင်းလိုက်တာပါ။
ဇူလိုင် ၃၁ ရက်နေ့ကစလို့ ယာယီရပ်ဆိုင်းကြောင်း ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်ခံ အဲဒီဌာနရဲ့ အသိပေးကြေညာချက်မှာ ဇူလိုင် ၂၈ ရက်ထုတ် သည်ဗွိုက်စ်ဂျာနယ်နဲ့ ဩဂုတ် ၂ ရက်ထုတ်
at 8/02/2012 02:53:00 PM No comments:
ကျေးဇူးတော်ရှင် မင်းကွန်းတိပိဋက ဓမ္မနာဒဆရာတော်ဘုရားကြီး ဘဒ္ဒန္တဝိစိတ္တသာရာဘိဝံသ ဟောကြားတော်မူသော တရားတော်များ
(Downlaod လုပ်ရန် လင့်ပေါ်ကို နှိပ်လိုက်ပါ)
၁။ဓမ္မစင်္ကြာ ၊ အနတ္တလက္ခဏသုတ်၊ မဟာသမယသုတ်
၂။ဓမ္မစင်္ကြာတရားတော် (မြန်မာပြန် -၁)
၃။ဓမ္မစင်္ကြာတရားတော် (မြန်မာပြန် -၂)
၄။ဓမ္မစင်္ကြာတရားတော် (မြန်မာပြန် -၃)
၅။ဓမ္မစင်္ကြာတရားတော် (မြန်မာပြန် -၄)
မဟာစည်ဆရာတော်ဘုရားကြီး ဦးသောဘန မဟာသာရ ဟောကြားတော်မူသောတရားတော်များ
၁။ ဓမ္မစင်္ကြာတရားတော် (၁) (ဆရာတော်နောက်ဆုံးဟောကြားတော်မူခဲ့သည့်တရား)
၂။ ဓမ္မစင်္ကြာတရားတော် (၂) (ဆရာတော်နောက်ဆုံးဟောကြားတော်မူခဲ့သည့်တရား)
၃။ ဓမ္မစင်္ကြာတရားတော် (၃) (ဆရာတော်နောက်ဆုံးဟောကြားတော်မူခဲ့သည့်တရား)
၄။ ဓမ္မစင်္ကြာတရားတော် (၄) (ဆရာတော်နောက်ဆုံးဟောကြားတော်မူခဲ့သည့်တရား)
၅။ ဓမ္မစင်္ကြာတရားတော် (၅) (ဆရာတော်နောက်ဆုံးဟောကြားတော်မူခဲ့သည့်တရား)
၆။ ဓမ္မစင်္ကြာတရားတော် (၆) (ဆရာတော်နောက်ဆုံးဟောကြားတော်မူခဲ့သည့်တရား)
၇။ ဓမ္မစင်္ကြာတရားတော် (၇) (ဆရာတော်နောက်ဆုံးဟောကြားတော်မူခဲ့သည့်တရား)
၈။ ဓမ္မစင်္ကြာတရားတော် (၈) (ဆရာတော်နောက်ဆုံးဟောကြားတော်မူခဲ့သည့်တရား)
မူရင်းလင့်ကတော့ http://www.dhammadownload.com ဖြစ်ပါသည်။
at 8/02/2012 02:51:00 PM No comments:
မိုးညှဲင်းမြို့ ညောင်ပင်ဈေးကို ဖျက်သိမ်းဖို့ အာဏာပိုင်များ လုပ်ဆောင်နေ
from-Myanmar News Now
ကချင်ပြည်နယ် မိုးညှဲင်းမြို့ညောင်ပင်ဈေးကို လာမယ့် အောက်တိုဘာလ (၃၀) ရက်နေ့ 
နောက်ဆုံးထားပြီး ဖျက်သိမ်းရန် ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊စည်ပင်လက်ထောက်ညွှန်မှူး၊
စည်ပင်ဦးစီးတို့ မှ အတင်းအကြပ် လုပ်ဆောင်နေပါတယ်။
အဆိုပါ ညောင်ပင်ဈေး ကို ၂၀.၉.၂၀၀၃ ခုနှစ်မှာ တရားဝင်ဖွင်.ပေးခဲ.ပြီး ၂၀၀၇ ခုနှစ်မှာ
at 8/02/2012 02:47:00 PM No comments:
ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်တွေနဲ့ ဘူးသီးတောင်-မောင်းတော ထောင်တွေကနေ ရန်ကုန် အင်းစိန်ထောင်ကို မနေ့က အကျဉ်းသား ၁၇၀ ကျော် ပြောင်းရွှေ့လိုက်ပြီး အဲဒီထဲမှာ ပါလာတဲ့ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား ကိုအောင်သူကို အာဏာပိုင်တွေက ရိုက်နှက်ခဲ့တယ်လို့ သတင်းရရှိပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံ၊ ရန်ကုန်မြို့ အနီးရှိ နာမည်ဆိုးဖြင့် ကမ္ဘာကျော်သော အင်းစိန်ထောင် ဖြစ်ပါသည်။ (Photo:RFA/Tyler Chapman)
ထောင်ပြောင်းလိုက်တဲ့ သူတွေထဲမှာ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေဖြစ်တဲ့ စစ်တွေထောင်က ကိုအောင်သူနဲ့ ဘူးသီးတောင်ထောင်က ကိုအေးမင်းဖြိုးတို့ ပါလာတာလို့ သိရပါတယ်။ အင်းစိန်ထောင် အရောက် မှာ
at 8/02/2012 02:44:00 PM No comments:
ရွှေစေတီဆရာတော် ကုလ အထူးကိုယ်စားလှယ်ကို အိတ်ဖွင့်စာ ပေးပို့
ရခိုင်ပြည်နယ်ကို ရောက်ရှိခဲ့တဲ့ ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ်ရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ လူ့အခွင့်အရေး ဆိုင်ရာ အထူးကိုယ်စားလှယ် မစ္စတာ ကင်တားနားဆီကို စစ်တွေမြို့က ရခိုင် ဒုက္ခသည်တွေကို စောင့်ရှောက်နေတဲ့ ရွှေစေတီ ဆရာတော် အရှင် အရိယဝံသက မနေ့မနက်ပိုင်းက အိတ်ဖွင့်ပေးစာ တစ်စောင် ပေးပို့လိုက်ကြောင်း ဆရာတော်က RFA ကို မိန့်ကြားပါတယ်။
၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇွန်လ (၁၀) ရက်က ရန်ကုန်မြို့ ရွှေတိဂုံဘုရား၌ ရခိုင်ပြည်နယ် ပဋိပက္ခအတွင်း သေဆုံးသွားသူများအတွက် ဆုတောင်းပွဲ ပြုလုပ်နေစဉ်။
အဲဒီ အိတ်ဖွင့်ပေးစာမှာ ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ ရခိုင်လူမျိုး အကြောင်း၊ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံ အသီးသီးနဲ့ ချစ်ကြည်ရေး
at 8/02/2012 02:39:00 PM No comments:
HRW စွပ်စွဲချက် သမ္မတ ပြောခွင့်ရ တုံ့ပြန်
တဖက်သက် သက်သေမျိုးလည်း ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ ဦးကိုကိုလှိုင်က ပြောပါတယ်
ရခိုင်ဒေသ ပဋိပက္ခတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မြန်မာလုံခြုံရေးတွေက အကြမ်းဖက်မှုတွေ မပျံ့နှံ့ အောင် မတားဆီးခဲ့ဘူးဆိုတဲ့ လူ့အခွင့်အရေး စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ HRW ရဲ့ စွပ်စွဲချက်ကို မြန်မာ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ရဲ့ နိုင်ငံရေး အကြံပေး တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဦးကိုကိုလှိုင်က ငြင်းဆိုသွားပါတယ်။
အစိုးရအနေနဲ့ အရေးပေါ် အခြေအနေ ကြေညာတာ၊ စုံစမ်း စစ်ဆေးရေး ကော်မရှင် ဖွဲ့တာနဲ့ လုံခြုံရေး တပ်ဖွဲ့တွေဝင်ပြီး ဖြေရှင်းပေးတာတွေကို အတတ်နိုင်ဆုံးနဲ့ အမြန်ဆုံး ဆောင်ရွက် ပေးခဲ့ တယ်လို့
at 8/02/2012 02:37:00 PM No comments:
အိန္ဒိယနှင့် မြန်မာစစ်ရေး၊ လုံခြုံရေး ပူးတွဲဆောင်ရွက်မှုမြှင့်တင်
နှစ်နိုင်ငံ စစ်ရေးနဲ့ လုံခြုံရေး ပူးတွဲဆောင် ရွက်မှုကို မြှင့်တင်တဲ့ အနေနဲ့ မြန်မာ့ တပ်မတော်က စစ်သည်တွေကို အိန္ဒိယနိုင်ငံက ပိုမိုလေ့ကျင့် သင်တန်းပေး သွားဖို့နဲ့ လက်နက် မဟုတ်တဲ့ စစ်ရေးဆိုင်ရာ ပစ္စည်းတွေ ထောက်ပံ့ ကူညီသွားဖို့ ဆုံးဖြတ် လိုက်ကြောင်း အိန္ဒိယ အစိုးရကမနေ့က ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။
၂၀၁၂ ခုနှစ် မတ်လ ၂၇ ရက်က နေပြည်တော်တွင် ကျင်းပသည့် ၆၇ ကြိမ်မြောက် တပ်မတော်နေ့ စစ်ရေးပြ အခမ်းအနား၌ ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မင်းအောင်လှိုင် စစ်ကြောင်းများအား စစ်ဆေးနေစဉ်။
အခုလို မဟာဗျူဟာအရ အရေးကြီးတဲ့ ကိစ္စတစ်ရပ်ကို ချမှတ်လိုက်တာဟာ မြန်မာစစ်တပ် ခေါင်းဆောင် ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့
at 8/02/2012 02:36:00 PM No comments:
ရှမ်းပြည်ပြန်လည် တည်ဆောက်ရေး ကောင်စီ ခေါ် ရှမ်းပြည်တပ်မတော် တောင်ပိုင်း RCSS/ SSA တပ်ဖွဲ့ဝင် (၇) ဦးအား ၀ပြည် သွေးစည်းညီညွတ်ရေး တပ်မတော် UWSA တပ်ဖွဲ့ဝင်များက ဖမ်းဆီးထားကြောင်း ဒေသခံများက ပြောသည်။
ထိုင်းမြန်မာ နယ်စပ်တလျောက်သို့ ရောက်ရှိလာသည့် စစ်ပြေးဒုက္ခသည်များ၏ စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်းအတွင်း ကူညီ ဆောင်ရွက်ပေးနေသော SSA တပ်မဟာ (၇၂၇) မှ တပ်ဖွဲ့ဝင်များ ယခုလ (၃၀) ရက်နေ့ က ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသည်ဟု နားကောင်းမှူး ဒေသခံ တဦးက အခုလို ပြောသည်။
“နေ့တိုင်းလိုပါပဲ ညနေပိုင်း အလုပ်သိမ်းချိန်ဆိုရင် သူတို့ ရွာထဲကို ၀င်လာလည်နေကျပဲလေ။ အဲဒီနေ့ကတော့ “၀” တပ်တွေက သူတို့ (၇) ယောက်ကို ဖမ်းသွားတယ်။ လက်နက် တွေတော့ မပါပါဘူး။ ခါတိုင်းလည်း ရွာထဲလာရင် ဘာလက်နက်မှ ယူမလာ ကြဘူးလေ။”
SSA တပ်ဖွဲ့မှ အမည်မဖော်လိုသည့် တပ်မှူးတဦးက မိုင်းတုန်မြို့နယ်
at 8/02/2012 02:35:00 PM No comments:
အင်တာနက်လိုင်းပါသည့် မိုဘိုင်းဖုန်းများအား တစ်ရက်(၄)ဒေါ်လာနှုန်းဖြင့် ငှားရမ်းနိုင်
အင်တာနက် လိုင်းပါသည့် မိုဘိုင်းဖုန်း များအား တစ်ရက် ငှားရမ်းခ အမေရိကန် ဒေါ်လာ (၄)ဒေါ်လာနှုန်းဖြင့် ပေးဆောင်ကာ ရန်ကုန် ၊မန္တလေးနှင့် ပုဂံမြို့များတွင် ငှားရမ်းနိုင်
ကြောင်း ရတနာပုံ မိုဘိုင်းငှားရမ်းခြင်းဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းက သိရှိရသည်။
''အင်တာနက်လိုင်း ပါဝင်တဲ့ SIM Card နဲ့ အင်တာနက်လိုင်း မပါဝင်တဲ့(SIM Card & Handset) တွေ ကို ဌားရမ်းနိုင်ပါတယ် '' ဟု ( Yatanarpon Mobile Rental Service ) မှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောသည်။
အင်တာနက်လိုင်းပါ SIM Card များအား ငှားရမ်းမည်ဆိုပါက သတ်မှတ်စပေါ်ငွေ အမေရိကန်
at 8/02/2012 02:34:00 PM No comments:
ဟောင်ကောင်သူဌေးကြီး လီကာရှင်းရဲ့ မှတ်သားဖွယ် စကားကြီး
ဘုရားသခင်က လူတိုင်းလူတိုင်းကို တစ်ရက်မှာ ၈ နာရီစာ အပိုင်းအခြားသုံးခုစီ မျှမျှတတပေးထားတယ်။ ပထမ ၈ နာရီမှာ လူတွေအလုပ်လုပ်ကြတယ်၊ ဒုတိယ ၈ နာရီမှာ လူတွေအိပ်ကြတယ်။
at 8/02/2012 02:33:00 PM No comments:
ရွှေမင်းသားဖောင်ဒေးရှင်းမှ ကချင်ဒုက္ခသည်တွေအတွက် လှူဒါန်း
ရွှေမင်းသားဖောင်ဒေးရှင်းမှ ကချင်စစ်ဘေး ဒုက္ခသည်များ အတွက် ၈၈မျိုးဆက်ကျောင်းသားများသို့ ချိုင်းထောက် အစုံ(၃၀)နှင့် ဘီးတပ် ထိုင်ခုံ (၃)စီး လှူဒါန်းခြင်း အခမ်းအနားကို၁.၈.၂၀၁၂ ခုနှစ် နံနက် ၁၀ နာရီတွင် ဝေဇယန္တာလမ်းရှိ ၈၈မျိုးဆက်ကျောင်းသားများ၏ ရုံးခန်းတွင် ကျင်းပခဲ့သည်။ ထိုအခမ်းအနားသို့ ရွှေမင်းသားဖောင်ဒေးရှင်း ဥက္ကဌ ဦးမြတ်သူဝင်းနှင့် တေးသံရှင် ဂျေညီညီ၊ ၈၈မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်
at 8/02/2012 02:32:00 PM No comments:
၀ါဆိုလပြည့်နေ့တွင် ရွှေတိဂုံဘုရားမှာ ဘုရားဖူးများဖြင့်စည်ကား
at 8/02/2012 02:31:00 PM No comments:
Labels: ဓာတ်ပုံ, သတင်း, အထွေထွေ
▼ 07/29 - 08/05 (175)
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်နှင့် ဦးခွန်ထွန်းဦး၊ ဦးအေးသာအေ...
၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရ တိုင်းရင်းသားပါတီတွေနဲ့ သ...
မလေးရှား ရခိုင်အမျိုးသားပိုင် မြန်မာ ဥယာဉ် စားသောက...
အလုပ်သမား ဆန္ဒပြမှု စုံစမ်းရေး ကော်မရှင်ဖွဲ့ရန် အဆို...
လျှပ်စစ် (၁) ၀န်ကြီးဦးဇော်မင်းရဲ့ ကိုယ်ကျိုးရှာမှု...
မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ဘက် နယ်စပ် ခြံစည်းရိုးခတ်ရုံနဲ့...
အလုပ်သမားဆန္ဒပြမှု စုံစမ်းရေး ကော်မရှင် ဖွဲ့စည်းဖို့...
လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှု ပပျောက်ရေး ဥပဒေကြမ်းကို အမျိုးသားလ...
သတင်းဂျာနယ်များပိတ်ပင်မှုနှင့် မတရားသော မီဒီယာဥပဒေဆ...
ဆန္ဒပြခွင့် ပိတ်ပင်သူတို့ကို လယ်သမားများက တရားစွဲရန...
လက်နက်ကိုင် လုံခြုံရေး တပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့် စစ်တြွေ...
ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ်ဟောင်း ဦးသန့်ပြတိုက် တည...
" အချိုးကျ ကိုယ်စားပြု ရွေးကောက်ပွဲ စနစ်လေ့လာရန် ပ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နှင့် မစ္စတာ ကွင်တားနား တို့ တွေ...
The Lady ရုပ်ရှင်အပြီး ထပ်ပေါ်လာမယ့် ဒေါ်အောင်ဆန်း စ...
သည်ဗွိုက်ဂျာနယ် ထုတ်ဝေခွင့် ရပ်ဆိုင်းခံရသည့်အပေါ်ေ...
မိုးညှဲင်းမြို့ ညောင်ပင်ဈေးကို ဖျက်သိမ်းဖို့ အာဏာ...
ရွှေစေတီဆရာတော် ကုလ အထူးကိုယ်စားလှယ်ကို အိတ်ဖွင့်စာ...
အိန္ဒိယနှင့် မြန်မာစစ်ရေး၊ လုံခြုံရေး ပူးတွဲဆောင်ရွ...
အင်တာနက်လိုင်းပါသည့် မိုဘိုင်းဖုန်းများအား တစ်ရက်(...
ရွှေမင်းသားဖောင်ဒေးရှင်းမှ ကချင်ဒုက္ခသည်တွေအတွက် လှူ...
၀ါဆိုလပြည့်နေ့တွင် ရွှေတိဂုံဘုရားမှာ ဘုရားဖူးများဖြ...
မြန်မာပြည် ရောက်ဖူးတဲ့ လူသား Barbie
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကို စစ်တွေထောင်ပို့ပြီး ရိုက်နှက်
မတရားသင်း ပုဒ်မဖြင့် ဖမ်းဆီးခံရသူ ကချင်အမျိုးသားတဥ...
ကုလ အထူးကိုယ်စားလှယ် ကယ်ဆယ်ရေး စခန်းတွေကို သွားရော...
တောင်ဒဂုံ စက်မှုဇုန် ၁ ရှိ ပီနန်အိတ်စက်ရုံ လုပ်သားမ...
သမတကြီး / လွှတ်တော်ဥက္ကဌကြီး သူတို့ကို အရေးယူပေးပါ (...
မိုး အားကောင်း၍ ရေကြီးရေလျှံ ကြုံနိုင်သေး
လက်နက်မှု၊ မူးယစ်မှုများဖြင့် ထိုင်းများကို မြန်မာတရ...
ပေါင်းလောင်းဆည် ဖောက်ချမှုကြောင့် ကျေးရွာ တချို့ရေကြီး
ကမ္ဘာ့ဘဏ် ထောက်ပံ့ကြေး ပြန်စပေး
မြန်မာပြည်တွင် ဘာသာရေး ချုပ်ချယ်မှုများရှိဟု အမေရိက...
OIC ထိပ်သီးအစည်းအဝေးတွင် ရခိုင်ပြည်နယ်ပဋိပက္ခ ဆွေးေ...
အာဏာရှင်နိုင်ငံတွေ မြန်မာ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုကို အတ...
မြန်မာနိုင်ငံ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု လမ်းကြောင်းအတိုင်...
၀န်ကြီး ဦးအောင်မင်း၏ BGF အသွင်သစ် လှုပ်ရှားမှု
၈၈ မျိုးဆက်၊ ရှစ်လေးလုံး စကားလုံး လွှတ်တော်တွင် မသံ...
ယမန်နေ့ ကပြုလုပ်ခဲ့သော ပြည်သူ့လွှတ်တော် အစည်းအဝေး ၁...
“အကယ်ဒမီ နှစ်နှစ်ပေါင်းပေးမယ် ဆိုရင် နှစ်နှစ်စာတော...
"ဆန္ဒပြအရေးဆိုမှု ဂယက် တောင်ဒဂုံ စက်မှုဇုံသို့စတင်က...